. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: March 2010
ကော်ဖီကို အိမ်က ဖေကြီးတို့မေကြီးတို့ကလည်း သောက်တတ်တော့ ငယ်ငယ်တည်းက သောက်ဖြစ် သောက်တတ်ခဲ့ပါတယ် .. ကော်ဖီသောက်ပြီး အိပ်မပျော်ခြင်းအဖြစ်ကိုလည်း မကြုံတွေ့ဘူးလို့ စာမေးပွဲရက်တွင်းမှာတောင် ကော်ဖီ သောက်ကောင်း အိပ်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ..
ကော်ဖီကို ဘာလို့ ကြိုက်လဲ .. ကျမအတွက် ကော်ဖီက ကိုယ် ချိုချင်ရင် ချိုတဲ့အရသာ ပေါ်အောင် ဖျော်နိုင်သလို ခါးချင်ရင်လည်း ခါးတဲ့အရသာ ပေါ်အောင် ဖျော်ပြီး စိတ်ကြိုက် သောက်နိုင်ပါတယ် .. တခါတလေ အချိုလွန်ပြီး ပျက်သွားတဲ့အခါ သွန်ပစ်လိုက်ရုံကလွဲပြီး တခြားဆိုးကျိုးလည်း မပေးပါဘူး .. ခါးသက်တဲ့ အရသာကို မနှစ်သက်ပေမယ့် တခါတလေ ခါးသက်သက်အရသာကလည်း ကျမကို ဆွဲဆောင်တတ်ပါသေးတယ် ..
စာအုပ်စာတမ်း လှလှလေးများ .. ဘောလ်ပင် ရောင်စုံ လှလှလေးများ ..
စာအုပ်လှလှလေးတွေ ဘောလ်ပင်ရောင်စုံလေးတွေ မြင်ရင် ကျမစိတ်က ၀ယ်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် .. ဒါကလည်း ငယ်တည်းက ကျမ အကျင့် တခုပါပဲ ..
ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ စာအုပ်လှလှလေးတွေမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေ ရေးကူးတတ်တယ် .. ရောင်စုံတွေနဲ့လည်း ဟိုလျှောက်ခြစ် ဒီလျှောက်ခြစ်ပေါ့ .. လက်ရေးကတော့ မလှပါဘူး .. :P
ဒီလိုတွေးလိုက်တော့လည်း ကျမမှာ အဖော်တွေ များမှ များပဲ .. ကျမအနားမှာ တခုမဟုတ်တခု (သို့မဟုတ်) အားလုံးက ရှိနေခဲ့တယ် ..
မဇွန်တဂ်တဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးပါ .. မိုးခါး အကြိုက်တွေ များလွန်းလို့ ခုချက်ချင်း ပေါ်လာတဲ့ အကြိုက်တွေကို စာစီရေးလိုက်ပါတယ် .. မကြိုက်တာတွေလည်း များမှ များပါပဲ .. :D ရေးတာ နောက်ကျလို့ စိတ်မဆိုးဘူး ထင်ပါတယ် ..း)) စိတ်ဆိုးနဲ့နော် ..း)) အရှုပ်တွေ များလွန်းနေလို့ပါ .. :D
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/15/2010 03:01:00 AM 21 comments: